ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ လေဆာပြွန်ဖြတ်စက် မှအရည်အသွေးမြင့် လေဆာပြွန်ဖြတ်စက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် လေဆာပြွန်ဖြတ်စက်။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwanအဆင်ပြေလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်လျောအလွန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မတူညီတဲ့အမှတ်အသားအမျိုးမျိုးနဲ့တန်ဖိုးထားကြသည်။
ပုံစံ - OPT-T220
optical system နှင့် control system ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု.
လေဆာစွမ်းအင်: ≤2000W ပါ
Clamping အကွာအဝေး: Ø10-Ø350
Axial တည်နေရာတိကျမှု: ±0.၀၅ မီလီမီတာ/မီတာ
သတ္တုပြွန်များဖြတ်တောက်ရန်သင့်လျော်သည်,rectangular tubes များဖြစ်သည်,ပုံပျက်သောပြွန်,စသည်တို့.,အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/laser-tube-cutting-machine.html
အကောင်းဆုံး လေဆာပြွန်ဖြတ်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် လေဆာပြွန်ဖြတ်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ